Tag: igwe mmụta | Martech Zone
Mkpado: mmụta igwe
Ebe ọtụtụ mmadụ na-etinye aka na ịkparịta ụka n'onlinentanet n'ịntanetị kwa ụbọchị, mgbasa ozi mmekọrịta aghọwo akụkụ dị oké mkpa nke usoro ịzụ ahịa maka ụdị azụmahịa niile. E nwere ndị ọrụ ịntanetị nde 4.388 n'ụwa nile na 2019, na 79% n'ime ha bụ ndị ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Global State of Digital Report Mgbe e jiri ya mee ihe n'ụzọ ziri ezi, azụmaahịa mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ nwere ike inye aka na ntinye ego nke ụlọ ọrụ, itinye aka na mmata, mana ịnọ na mgbasa ozi ọha na eze apụtaghị iji ya
Nchekwa akara bụ ihe dị oke mkpa maka ndị na-ere ahịa na-aga n'ihu na ọnọdụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke akụ na ụba ma nwee ike ime mgbanwe dị na azụmaahịa. Branddị ugbu a na-adọpụta mgbasa ozi mgbe niile n'ihi na ha na-apụta n'ọnọdụ ndị na-ekwesịghị ekwesị, na 99% nke ndị mgbasa ozi na-echegbu onwe ha banyere mgbasa ozi ha na-apụta na gburugburu nchekwa-nchekwa. E nwere ezi ihe kpatara nchegbu Nnyocha egosila mgbasa ozi na-egosi na ọdịnaya adịghị mma na-ebute nsonye 2.8 ugboro na